दुई वर्षकी बालिकाले मास्क नलगाएको भन्दै आमाछोरीलाई नै विमानबाट झा’रियो , जब कि ति सानी बालिकाले दहि खादै थिईन ! (भिडियो सहित) - Rising Dainik
April 8, 2021 April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on दुई वर्षकी बालिकाले मास्क नलगाएको भन्दै आमाछोरीलाई नै विमानबाट झा’रियो , जब कि ति सानी बालिकाले दहि खादै थिईन ! (भिडियो सहित)
काठमाडौं –अमेरिकामा एक दुई वर्षकी बालिकाले मास्क नलगाएको भन्दै उनको पुरा परिवारलाई नै विमानबाट तल झा’रिएको छ। गत सोमबार स्पि’रिट एयरलाइन्सका स्टाफले ७ वर्षकी ग’र्भव’ती महिला उनकी दुई वर्षकी छोरी, अपांगता भएका छोरा र उनको श्रीमानलाई विमानमा सवार हुन दिएका थिएनन्
सानी बालिकाले दही खानको लागि मास्क खोलेकी थिइन्। न्युजर्सीबाट फ्लो’रिडाको ओ’र्लान्डोको लागि उड्न लागेको विमानबाट उनीहरुलाई झा’रिएको थियो। यो घ’टनाको भिडिओ पनि सार्वजनिक भएको छ। ७ वर्षकी ग’र्भवती अभितालले आफूहरुले मास्क लगाएको बताउँदा फ्ला’इट ए’टेन्डेन्टले २ वर्षकी बालिकाले मास्क नलगाएकाले सबैले विमानबाट झ’र्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
यद्यपी त्यहाँ सवार यात्रुहरुले विमानका कर्मचारीको वि’रोध जनाए। दुई वर्षकी बालिकाले मास्क खो’लेर दही खानु कुनै अ’परा’ध नभएको भन्दै आवाज उठेको थियो। उनीहरुलाई विमानमा सवार हुन न’दिए आफूहरु सबै विमानबाट बा’हिरिने बताएपछि भने अभितालको परिवार सोही विमानमा चढेर फ्लो’रिडा पुगेका थिए।
कपिलवस्तु पुगेर ओली र प्रचण्डमाथि विप्लवको ह’मला : हामीले छोडेपछि प्रचण्ड धु’लोपिठो हुन २० महिनै लागेन : विप्लव
अब जनयुद्धका नाईकेको सम्पती छानविन हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली